Furtuuwwan Qaxxaamuraa waliigala LibreOffice keessaa
Furtuuwwan Qaxxaamuraa fayyadamu
Yemmuu fayyadama kee dalagdu, gidduu hantuuttee filuu ni dandeessa yookiin gabatee cuqoo akka fayyadamaawwan hunduu argaman.
Furtuwwan Qaxxaamuraa Qaaqa Too'annoo dhaaf fayyadamuu.
Furtuuwwan Qaxxaamura Gochawwan Hantuutteef
If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, CommandCtrl and occasionally OptionAlt to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable. Argamiinsi faankishinii kanaa Taliigaa Foddaa X kee irratti hundaa'a.
Dirreewwan Hojoomsa Barruu ciicataa
Baafata halqaraa ajajawwan muraasa darbee darbee fayyade kan qabate banuu ni dandeessa.
Jecha kana filachuuf lama-cuqaasi.
Dirree ciicata barruu keessatti sadi-cuqaasuun diirree hundaa fila. Galmee barruu keessatti sadi-cuqaasuun hima ammeefe fila.
Harkisuu-fi-kaa'umsafayyaduu kan danda'uu barruu sanduuqaa walinii fi isaan alatti.
Maakiroowwan Addaan baasuu
Tarreeffama Furtuuwwan Qaxxaamuraa waliigala LibreOffice keessaa.
Gocha yk qaaqa xumura. Yoo Gargaarsa LibreOffice keessa: sadarkaa tokko ol deema.
saanduqa filannoo isa qaaqa tokko keessatti xiyyeeffatame ceetaa'a
Too'annoo dirree damamaqaan dirqala keessa kan kutaa qaaqa jijjiira.
Xiyyeeffannoo gara kutaa ittaanutti yookiin miciraan qaaqa keessaa dursa.
Xiyyeeffannoo gara kutaa duraanii yookiin miciraan qaaqa keessaa Sochoosa.
Galmee ammeea kaa'a
Galmee haaraa uuma.
Qaaqa Argachuu fi Bakka buusuu waama.
Jecha barbaaddu kan dhuma galee barbaada.
Mul'annoo galmee irra deebi'ee kaasa.
Qaree filannoo barruu-dubbisuu-qofaa keessaa nidandeessisa yookiin hin dandeessisu.
Gargaarsa: LibreOfficekeessaatti gara fuula ijoo gargaarsatti utaala.
Xiyyeeffannoo foddaa xiqqoo duraanii kessatti olka'a.
AjajaCtrl+F4 ykn DirqalaAlt+F4
Fayyadama keessa baasa.
Yeroo jalqaba irraantootti qubate,Caancalli ni saagama.
Galchi (yoo wanti OLE filatame)
Wanta OLE filatmee kakaasa.
Galchi(yoofakkiin wantaa yookiin barnuun wantaa filatame)
Barruu naqa Haalataa kakaasa
Maalimawwan filataman mura.
Tarreefama Maalimawwan filatamanii jalteessa.
Dhaqqaba waraqaarraa maxxansa.
Gabatee muraa irraa barruu hin dhangeeffamne maxxansa. Barruun kun dahangii akeekii saaggii irra jiruutin maxxasama.
Maxxansa Addaa qaaqaa bana.
Gochadhuma hin hojjetu.
Gocha dhumaa irra deebia hojjeta.
Ajajadhumaa irra deebi'a
Furtuwwan Qaxxaamuraa kuusaa Faayaa keessaa
Filannoo gara gadiitti sochoosa
Filannoo gara gadiitti sochoosa.
Baafata haalqaraa bana.
Dhaamsa filatamee haaramsa.
Qaaqa Mataduree Galchii qaaqaa bana.
Dhaamsa filatamee haqa.
Gara galfata jalqabaatti utaalchisa.
Gara galfata xumuuraaraatti utaala. utaalchisa.
Maalima kuussa faayaa ittaanuu bitaa irraa irraa fila.
Maalima kuussa faayaa ittaanuu mirga irratti fila.
Maalima kuussa faayaa ittaanuu olitti fila.
Maalima kuussa faayaa ittaanuu gadii fila.
Wanticha filatamee akka wanta quunnasiisaa galmee ammee keessatti saaga.
Baay'ifama Wanticha filatamee galmee ammee keessaatti saaga.
Mul'annoo dhaamsawwani fi mul'annoo wantaa gidduu jijjiira.
Xumura guddaa duubatti jijjira.
Fakkasaa Wantota Saa
Fakkasa Wanta Fila.
Fakkasa wantaatoo ittanu Fila.
Fakkasa wantoo duraanii fila.
Fakkasa Wantaa jalqabaa fila.
Fakkasa Wantaa dhumaa fila.
Filannoo Fakkas wantaa Xumura.
Dhiisi(Filannoo Haalata Qabannoo keessa)
Qabxii Filannoo haalata fakkasa wantaaf kakaasa.
Qabxiin filatamee seekondiitti al tokko ibsata.
Fakkasa wantaa haaraa ,hammamtaa duraantoo waliin handhuura mul'annoo ammee keessaatti kaa'ameera.
Fakkasa wantaa jalqabaa galmee keessaa kakaasa.
Barruu kamiyyuu yookin furtuu lakkoofsaa
Yoo fakkasni wantaa filatamee haalata gulaaluuf fi qaree dhuma barruu fakkasa wantichaa keessa olkaa'a. Arfiin maxxanfamuu danda'uu ni saagama.
Furtuu DirqaleeAlt yommuu wanta saxaatoo uumtuu fi guddistu
Iddoo handhuura wantichaa dhaabataadha.
Furtuu jijjiirraa wayita caatoon wantaa uumamu yokin guddatu
Qabxii bal'inaa gara dheerinaa wantichaa dhaabataadha.
Title is: Furtuuwwan Qaxxaamuraa waliigala $[officename] keessaa